Mbido nke Social Network - Colts Fan Network | Martech Zone
Ezigbo enyi m, Pat Coyle edegharịrị blọọgụ ya na Egwuregwu Egwuregwu 2.0 ma na-ede ugbu a banyere mgbanwe nke Colts Fan Network. Nke a bụ Oké Ifufe (n'ụzọ dị mma)… ndị na-ege ntị na-eguzosi ike n'ihe (nke a na-apụghị izuru ohi), ntanetị ịntanetị maka ha ịkekọrịta iguzosi ike n'ihe na ịhụnanya ha maka nnukwu ìgwè, na teknụzụ iji mee ya. Pat bụkwa ọkachamara n'okwu ya mere blọọgụ ya na-atọ ụtọ nke ukwuu. Ya akuko nke a igba egbe bụ ihe ị na-ekwesịghị ileghara!
Nke a bụ foto nke Colts Fan Network (edere n'oge na-adịbeghị anya banyere Mashable).
Mgbalị a bụ mmeri-mmeri maka Colts. Indianapolis Colts bụ “Otu America”, otu ndị nwere ọtụtụ fans na mba ahụ. Akụkụ ọ bụla nke otu ahụ dị ịtụnanya - Jim Irsay abatala n'onwe ya dị ka onye nwe ọmarịcha, na-achọta ikike kacha mma na mba ahụ ma nye ha ohere ịrụ ọrụ. “Bill Polian bụ Onyeisi nke Indianapolis Colts NFL otu. O merie NFL nke Executive Executive nke Afọ ugboro 5 (1988, 1991, 1995, 1996, na 1999). Polian bụ General Manager nke ego Buffalo site na 1986 - 1993, na-ewu otu ndị sonyere na Super Bowls anọ (ọ nọ ebe ahụ maka 3 n'ime ha). Polian bụ onye isi njikwa nke mgbasawanye Carolina Panthers ruo mgbe ọ gafere na Colts na 1997. ” - Wikipedia.
Tony Dungy bụ Onye Nchịkwa nke Colts. Nkuzi Dungy bụ ihe ịrịba nchịkwa na onye. “Dungy bụ ezigbo Onye Kraịst ma n'otu oge n'ọrụ nkuzi ya tụlere ịhapụ football maka ozi ụlọ mkpọrọ. Kemgbe ọrụ ya, ọ na-esonyere ndị otu na-elekọta obodo. ” - Wikipedia.
Ma n'ezie ndị egwuregwu na-eme ya… Payton Manning, Jeff Saturday, Marvin Harrison, Dwight Freeney, Cato June… enwechaghị otu ọkpụkpọ na - apụta (agbanyeghị na ndị na - ebi akwụkwọ na - etinye oge na Payton). N'ezie, ọ bụ otu ìgwè karịa ụyọkọ kpakpando ndị na-eche echiche ịdị iche na ibe ha. A na-asọpụrụ ndị otu a, ị gaghị ahụkarị ndị Colts na akụkọ maka ihe ọ bụla ọzọ karịa ezigbo than ụkọ egwuregwu ndị ọkachamara. Lelee ngalaba Community na Colts.com iji hụ ihe ndị Colts na-emere obodo. Ọ dị mma ịhụ. N'ebe a na Indy, ụlọ ọrụ NBA anyị ka na-etinye aka na ihere ọzọ… ya mere ndị Colts nọ na ebe nlebara anya na nkwanye ugwu. Anyị kwenyere!
Nzụlite Pat dị ka Guru Marketing bụ ihe zuru oke iji duzie nke a. Enwere m obi ụtọ iso Pat na Darrin Gray na-arụ ọrụ n'otu ụlọ ọrụ a na-akpọ Nkenke ebe anyị gburu ahịa na mgbasa ozi maka ọtụtụ azụmaahịa ebe a na Indy (gụnyere Colts). Mgbe ndị Colts kpọrọ Pat oge niile iji nyere ha aka iwulite mmekọrịta ka mma n'etiti ndị Fans na ndị ji oge tiketi - nke ahụ bụ ohere ọ na-agaghị agabiga! M ka na-agwa Pat okwu kwa izu ma anyị na-etinye aka na mpaghara Indianapolis Book Club ebe anyị na-atụle ma mejuputa echiche sitere na akwụkwọ azụmaahịa kachasị ọhụrụ na nke kachasị n'okporo ámá. Anyị na ụfọdụ ndị uche dị elu na-esonye na Marketing ebe a na Indianapolis na m mụtara ọtụtụ ihe site na ikpughe ndị a nwere nkà.
Lelee Egwuregwu Marketing 2.0 iji lelee mgbanwe nke Social Network. Ọ ga-atọ ụtọ!
Ọkt 16, 2006 na 6:27 AM
Enwere m mmasị mgbe niile ikike gị na ịzụ ahịa na teknụzụ, mana ugbu a enwere m ike ịhụ na ọ ga-abụ na agbagharala ọkpụkpọ gị. Ị kwesịrị ịnọ na PR maka m !!
Daalụ maka okwu ọma na ime ka ndị mmadụ mara maka Colts Fan Network. Anyị na-arụsi ọrụ ike ịkwado saịtị ahụ maka mmalite - enweghị m ike ichere ịmalite nnwale ahụ!
Otu ihe m kwesịrị igosi, Otú ọ dị. Ndị Colts nwere ike ịnwe ndị otu NFL na-eto ngwa ngwa, mana anyị enweghị ndị na-akwado ya, ma ọ bụ anyị bụ “Ndị otu America.” Ụdị abụọ ahụ ka na-aga na Dallas Cowboys. Akara ahụ malitere inwe ike na 1970 ma na-aga n'ihu na-atachi obi.
Olileanya m bụ na otu ụbọchị site na iji amamihe nke ịzụ ahịa na teknụzụ - yana ụda nke mmekọrịta chiri anya ndị ahịa - anyị nwere ike ịrịgo n'elu.
Ọkt 16, 2006 na 8:11 AM
Ma ndị Cowboys na-aṅụ.
Ọgọstụ 22, 2007 na 6:01 ehihie
Ọ bụ ihe na-akpali m na m ahụbeghị ihe egwuregwu ịkparịta ụka n'Ịntanet na saịtị tinyere edoghi nke facebook wdg… Enweela ọtụtụ ndị ọzọ ntụrụndụ metụtara saịtị. Ugbu a, m na-arụ ọrụ na netwọk mmekọrịta maka Ndị hụrụ Fim. N'ezie ewepụtara ya ihe na-erughị otu ọnwa gara aga. Abụọ azụmahịa mmekọ m, m belive kere a nnọọ siri ike saịtị na-enye ohere onye ọrụ nke ukwuu na usoro nke nkiri reviews ratings na kasị mkpa ha onwe ha top nkiri ndepụta (ihe niile nwere ike reordered site ịdọrọ na idobe). N'ịbụ naanị otu ọnwa ma ọ bụ karịa, ekwenyere m na anyị ga-enweta ihe ịga nke ọma n'otu ụzọ ahụ netwọk a nwere - ma PR na okwu ọnụ bụ akụkụ kachasị mkpa. Ọ dị mma ma enwere m olileanya ịhụ gị niile na filmcrave.com.